News | amitab
News | Tag: amitab
अमिताभ बच्चनबारे अनौठा कुराहरु
एजेन्सी । बलिउडका ‘बिग बि’ अमिताभ बच्चनको डिमाण्ड आज पनि उत्तिकै रहेको छ । उनले एउटा फिल्म खेलेको १८ देखि २० करोड सम्म लिने गरेका छन् । बुढेसकाल लागेपनि सबैभन्दा धेरै पैसा लिने अभिनेताहरुको टप १० सुचीमा अमिताभ रहेका छन् ।
राजनीतिदेखि किन यति धेरै डराउँछन् अमिताभ
एजेन्सी । बलिउडका महानायकका रुपमा परिचीत अमिताभ बच्चन ६ दशक देखि अभिनय कलामा रहेका छन् ।
कंगाल भइसकेका थिए अमिताभ, तर भाग्य बलियो भएपछि...
एजेन्सी । बलिउडका बिग बि अमिताभ बच्चनले आफु टाट पल्टेको बेलाको बारेमा कस्तो महसुस हुन्थ्यो भन्ने बारेमा मुख खोलेका छन् ।
आँशुको सागरमा जब अमिताभ डुबे
रेखा होइनन् कोही अरु नै थिइन् अमिताभकी पहिलो प्रेमिका
एजेन्सी । अमिताभ बच्चनका पहिली प्रेमिका न त जया बच्चन थिइन न त रेखा । त्यसो भए को थिइन त ? उनकी पहिलो प्रेमिका ब्रिटिस कम्पनी आइसीआइमा काम गर्ने महाराष्ट्रकी युवती चन्द्रा (नाम परिवर्तन) थिइन । दुवै जना कलकत्तामा जागिर गर्थे । अमिताभलाई १५ सय र चन्द्रालाई ४ सय तलब मिल्थ्यो ।
को हुन् अमिताभ बच्चनको पहिलो प्रेमिका ?
जब अमिताभ बच्चनबारे यस्तो झुटो हल्ला फैलियो
एजेन्सी । बलिउड सेलिब्रिटीहरुबारे कहिलेकाही यस्तो हल्ला चल्छ जसले मानिसलाई अन्योलमा पार्ने काम गर्छ कतिपय सामाजिक सञ्जालमा त उनीहरुको मरोको घोषणा समेत हुने गरेका छन् । यस्ता हल्लाको शिकार भएका छन् केही बलिउड सेलिब्रिटीहरु । तीमध्येका एक हुन् अमिताभ बच्चन ।
'मलाई कतिले पैसा तिर्दैनस् भन्दै धम्काए पनि...'
बलिउडका बिग बि अमिताभ बच्चनले आफु टाट पल्टेको बेलाको बारेमा कस्तो महसुस हुन्थ्यो भन्ने बारेमा मुख खोलेका थिए ।
त्यसपछि उनले अमिताभको आमने सामने हुन छोडिदिइन्...